आईफोन Int लाई प्रस्तुत गर्‍यो जुन A8 बायोनिक चिप, स्मार्टफोनमा सब भन्दा छिटो प्रस्तुत गर्दछ म म्याकबाट हुँ
आईफोन Int लाई प्रस्तुत गर्‍यो जुन स्मार्टफोनमा सब भन्दा छिटो A8 बायोनिक चिप प्रस्तुत गर्दछ
टिम कुकले परिचय दिनको लागि मुख्य कमाण्ड लिएको छ नयाँ र अपेक्षित आईफोन। पछिल्लो आईफोनमा प्रस्तुत भएका सबै समाचारहरू सम्झाउँदै पछि, र त्यो एक वा अर्को तरिकाले हाम्रो जीवन परिवर्तन भएको छ र किन हुँदैन, सामान्यतया टेक्नोलोजीको संसारले पायो। फिल Schiller.
नयाँ आईफोन्सले रंगहरूमा हामीलाई चकित पार्दैन: चाँदी, स्पेस ग्रे र गोल्ड। हामी पनि आकारमा दोहोर्याउँदछौं, हामीसँग फेरि 4,7 र .5.3.। इन्च छ। तर यदि हामी अरू सबैमा समाचार प्राप्त गर्छौं। शुरुवातकर्ताहरूको लागि, हामीसँग एक सुधारिएको रेटिना एचडी डिस्प्ले छ, जुन पहिलो पटक प्रविधि समावेश गर्दछ Truetone.
सबै नयाँ टेक्नोलोजी नयाँमा आधारित छ A11 बायोनिक, हामी अर्को केही दिन विस्तारमा हेर्नेछौं, उपनाम बायोनिक एप्पलले प्रस्तुत गर्ने संवर्धित वास्तविकताको अंश सार्नको लागि जिम्मेवार हुनेछ। यो आईफोन6को तुलनामा c कोर माउन्ट हुनेछ we हामी हेर्छौं, आईफोन of को नयाँ चिपलाई ईर्ष्या गर्न केही पनि छैन। यसको पूर्ववर्ती भन्दा २%% छिटो छ र %०% बढी सक्षम छ। यस नयाँ चिपले म्याकको लागि एप्पलद्वारा सिर्जना गरिएको प्रविधिको फाइदा लिन्छ र हामीलाई समान सुविधाहरू ल्यापटप र डेस्कटपहरूमा अनुमति दिन्छ। तसर्थ, नयाँ आईफोन विकासकर्ताहरूले यसको फाइदा लिन सक्दछन् धातु २ र कोर ML खेलहरू सिर्जना गर्न, थ्रीडी टेक्नोलोजीको साथ पनि।
आईफोन क्यामेराले पनि महत्वपूर्ण सुधारहरू प्राप्त गर्दछ: हामीसँग छ १२ MP क्यामेरा, जो जोडीएको छ नयाँ सेन्सर धेरै रचनात्मक फोटोहरूका लागि। मुख्य भाषणमा, फोटोमा मुख्य चरित्रको आँखाको विवरण उदाहरणका रूपमा दिइन्छ, वा फोटोमा ठूलो कन्ट्रास्ट जहाँ मुख्य वस्तु धेरै उज्यालो हुन्छ।
अन्तमा, क्यामेरासँग महत्त्वपूर्ण छ स्थिरता, जुन विशेष गरी भिडियोमा हराइरहेको थियो। विशेष गरी भिडियोमा, फिल शिलरले औंल्याए कि यो स्मार्टफोन हो जसले सब भन्दा राम्रो भिडियो रेकर्ड गर्दछ। नयाँ रेकर्डि for स्वरूपहरू: K० fps मा kk र4२ 60० fps मा।
मूल्यहरु को सन्दर्भ मा, हामी युरोप मा मूल्यहरु अहिले सम्म थाहा छैन, तर संयुक्त राज्य मा, हामी उपलब्ध छ आईफोन $ starting 8 at बाट सुरू हुन्छ र आईफोन Plus प्लस $ 699 8 बाट सुरु हुन्छ। निराश नहुनुहोस्, यदि तपाइँ एक चाहानुहुन्छ भने, तिनीहरू उपलब्ध हुनेछन् सेप्टेम्बर १।
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल » हाम्रो बारेमा » आईफोन Int लाई प्रस्तुत गर्‍यो जुन स्मार्टफोनमा सब भन्दा छिटो A8 बायोनिक चिप प्रस्तुत गर्दछ
संवर्धित वास्तविकता नयाँ आईफोन to लाई धन्यवाद दिन्छ
नयाँ एप्पल टिभी 4k HDR पुष्टि भयो